Hagaha Tallaabo-tallaabo ee Cilmi-baarista Ereyga (Bonus: Qalabka Cilmi-baarista Erayga Ugu Fiican Marka La barbardhigo) | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Hagaha Tallaabo-tallaabo ee Cilmi-baadhista Ereyga (Bonus: Qalabka Cilmi-baarista Erayga Ugu Fiican Marka La barbardhigo)
Hagaha Tallaabo-tallaabo ee Cilmi-baadhista Ereyga (Bonus: Qalabka Cilmi-baarista Erayga Ugu Fiican Marka La barbardhigo)
0 Daqiiqado 17 ayaa akhriyay
Bal qiyaas in ka badan rubuc milyan oo soo booqda goobtaada bil kasta. Waxaan samaynay mahadsanid cilmi-baarista ereyga muhiimka ah:
Taraafikada SEO-ga bishii
Sawir-qaadistaasi waxay ka timid mid ka mid ah bogaggayga oo lagu magacaabo Wandering RV. Aniga iyo xaaskayga waxaan ka korinay goobtan goob cusub oo aan gaarnay rubuc milyan booqashooyin bille ah saddex sano gudahood oo aan ka yarayn 30 maqaal.
Haa, sidoo kale waa inaad abuurtaa waxyaabo aad u fiican oo aad dhisto isku xirka nuxurkaas, laakiin ficiladaas ayaa imanaya ka dib marka aad ogaato ereyada muhiimka ah ee ugu wanaagsan ee lagu beegsanayo. Olole kasta oo SEO ah oo guuleysta wuxuu ku bilaabmaa cilmi-baarista muhiimka ah; ka bood tillaabadan khatartaada.
Sida Loo Sameeyo Cilmi-baarista Keyword (Tallaabooyin Degdeg ah):
Erayada muhiimka ah ee wanaagsan waxay sameeyaan ama jebiyaan olole suuqgeyn SEO ah oo guuleysta. Halkan waxaa ah tillaabooyinka muhiimka ah ee lagu bilaabayo cilmi-baarista muhiimka ah:
1 Step: Raadi fikradaha muhiimka ah ee ku salaysan ereyada muhiimka ah, raadinta la xidhiidha, ereyada muhiimka ah ee daba-dheer, iyo LSI.
2 Step: Hubi erayga muhiimka ah ee RUNTA ah ee adag iyo mugga raadinta.
3 Step: Go'aami ujeedada isticmaalaha.
Tilmaan-bixiyaha maanta, waxaan la wadaagayaa hage-tilaabo tallaabo ah oo ku saabsan cilmi-baarista ereyga muhiimka ah kaas oo daboolaya kaliya maaha sida loo helo boqollaal erey oo muhiim ah, laakiin sidoo kale sida loo sheego kuwa u wareejin kara irbadda ganacsigaaga oo aan u qalmin wakhtigaaga . Aan quusno!
Aasaaska Cilmi-baarista Keyword
Kahor intaanan ka hadlin tillaabooyinka saxda ah ee lagu heli karo ereyada muhiimka ah ee ololahaaga SEO, aan si kooban u daboolno cilmi-baarista ereyga muhiimka ah iyo sababta aad u daryeesho.
Waa maxay Cilmi-baarista Keyword?
Cilmi-baarista ereyga muhiimka ah waa ficilka raadinta iyo hubinta ereyada muhiimka ah ee lagu beegsanayo ololaha SEO.
Tan waxa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo tiro qalabyo ah oo bilaash ah iyo/ama lacag ah oo ku tusaya waxa ay dadku ka raadinayaan Google iyo matoorada kale ee raadinta.
Tilmaamaha qotodheer ee lagu soo jeediyay: Google Search Console iyo Aaladaha Mareegaha Mareegaha Bing.
Doorka Cilmi-baarista Ereyga Furaha ee Suuqgeynta Dijital ah
Sida aad ku baran doonto qaybta xigta, tayada ereyada furahaagu waa faraqa u dhexeeya ololaha suuqgeynta ee guuleysta iyo waqti lumis. Erayada muhiimka ah ee aad soo qaadatid ayaa go'aamin doona istaraatiijiyada suuqgeynta SEO ee bilawga ilaa dhammaadka.
Aynu aragno sida.
Sidee bay muhiim u tahay cilmi-baadhista ereyga furaha? (Ha ka boodin tan!)
SEO waxay noqon kartaa mid adag, laakiin waxay hoos u dhigtaa saddex aasaas:
Saddexdaas, cilmi-baarista ereyga muhiimka ah ayaa ah tan ugu muhiimsan.
Waa maxay sababtu? Sababtoo ah waxaad abuuri kartaa nuxurka ugu fiican oo waxaad dhisi kartaa xiriiriyeyaal cajiib ah oo kuu keenaya #1 qiimeynta Google oo weli aad helayso faa'iidooyin eber marka loo eego kobaca ganacsiga ama dakhliga haddii aad bartilmaameedsato ereyada muhiimka ah ee khaldan.
Tusaale ahaan, aynu nidhaahno waxaad doonaysaa inaad ku qorto qaar ka mid ah waxyaabaha ku jira baloogga boggaaga si aad uga muuqato bogga koowaad ee Google. Waxaad haysataa fikrad ah boostada blog oo waxaad u maleyneysaa inaad leedahay erey muhiim ah oo wanaagsan oo lagu beegsanayo. Waxaad samaysaa waxyaabo yaab leh, ku dhis xidhidhooyin iyada oo martida soo dhejinta iyo fariimaha iimaylka ah (halkan waa sida loo helo ciwaanka iimaylka qof kasta), oo ku dhammaata bogga kowaad ee Google. Waxaad helaysaa boqollaal booqasho bishiiba…
Laakiin dakhligaaga maqaalkaas wuxuu ahaanayaa dufan weyn $0.
Taasi waa sababta oo aadan si habboon u baarin eraygaaga muhiimka ah ka hor. Waxaa laga yaabaa inaad heshay kelmad muhiim ah, laakiin helida kelmad furaha iyo samaynta cilmi-baadhista ereyga muhiimka ah waa waxyaabo aad u kala duwan.
Si sax ah u baadhida kelmadda muhiimka ah waxa ay la macno tahay in aad fahanto kartida dakhliga, sida uu u tartamayo, iyo xataa nooca saxda ah ee nuxurka aad u baahan tahay in aad abuurto si aad u awoodo inaad u darajayso. Waxaad arki doontaa waxa aan ula jeedo dhamaadka hagahan.
Marka la soo koobo: Cilmi-baarista saxda ah ee ereyga muhiimka ah waxay noqon kartaa farqiga u dhexeeya ololaha SEO ee si duurjoogta ah u guuleysta kaas oo ka dhigaya ganacsigaaga lacag badan iyo waqti lumis waqti iyo lacag ah.
Raadi mugga iyo ereyada furaha dabada dheer
Fikradda ugu horreysa ee lagu fahmo ereyada muhiimka ah waa mugga raadinta.
Tani waa waxa dadka intooda badan ay eegaan marka ugu horeysa ee ay bilaabaan baaritaanka ereyada muhiimka ah, iyo sidoo kale mid ka mid ah cabbirada ugu xun ee la eego.
Mugga raadinta sare waa wax khiyaano badan laba sababood dartood:
Tirada cayriin ee dadka wax raadinaya ayaa aad u yar oo ku saabsan inta aad dhab ahaantii ka heli karto taraafikadaas. Tusaale ahaan, haddii aad u darajeyso erey fure ah oo hela 10,000 oo raadin bishii, laakiin haddii dadku ay kaliya raadinayaan macluumaadka oo aysan diyaar u ahayn inay iibsadaan (tilmaan: waxaad u baahan doontaa inaad qeexdo ujeeddada raadinta. In ka badan hoos.), in waxba uma qabanayso guntaada.
Sababtoo ah 10,000 oo qof ayaa raadiya kelmad muhiim ah macnaheedu maaha dhammaan 10,000 qof ayaa dhab ahaantii gujinaya natiijada. U fiirso ereyga muhiimka ah "Immisa jir buu Trump yahay", tusaale ahaan - waxay helaysaa 30,000 oo baaritaan bishii, laakiin kaliya 13% dadkaas ayaa dhab ahaantii gujinaya wax kasta. Taasi waa sababta oo ah dadku waxay si sax ah jawaabta Google uga helaan oo uma baahna inay gujiyaan si ay u helaan.
Mugga Raadinta kelmad-furaha ilaa Riix-Qeybta
Tusaalaha ereyga muhiimka ah ee xun
Dhanka kale, mugga raadinta hooseeya macnaheedu maaha in ereyga muhiimka ahi xun yahay ama lambarka aad aragto waa tirada booqdayaasha aad heli doonto. Dhab ahaantii dhammaan boggaga Google ku qiimeeyay hal kelmad ayaa sidoo kale ku darajo daraasiin, boqolaal, iyo mararka qaarkood kumanaan ereyo kale oo muhiim ah.
Erayadan kale ee muhiimka ah ayaa badanaa ah ereyo isku mid ah iyo kala duwanaansho dabo-dheere ah. Waxa kale oo jira ereyada muhiimka ah ee Semantic Indexing (LSI), kuwaas oo aan ka helo qayb hoose.
Tusaale ahaan, u fiirso qoraalkan ay xaaskayga Kayla, ugu qortay The Wandering RV. Waxay beegsanaysay ereyga muhiimka ah "qalabka xerada ugu fiican", kaas oo hela qiyaastii 2,700 baaritaan bishii sida uu qabo Ahrefs. Laakiin sida aad ku arki karto sawirka hoose, waxa ay sidoo kale darajaynaysaa 1,912 ereyada muhiimka ah ee kale iyo xitaa darajooyinka bogga koowaad ee "qalabka xerada" ee 32,000 raadinta bishii!
Dulucda sheekada? In kasta oo mugga raadinta uu yahay mitir muhiim ah, waa inaadan ku salayn ereyada muhiimka ah ee bartilmaameedka ah oo keliya inta qof ee raadinaya bil kasta (haddii aanad diiradda saarayn wacyigelinta astaanta iyo/ama dakhliga xayeysiiska ee ku salaysan aragti kasta).
Ujeedada raadinta waa dhab ahaan waxa ay u egtahay-ujeedada qofka raadinaya kelmad muhiim ah oo la bixiyay. Waxay la mid tahay fikradda suuq-geynta “ujeedada iibsadaha”.
Si kale haddii loo dhigo: muxuu adeegsaduhu raadinayaa?
Ma waxay raadinayaan shay ay diyaar u yihiin inay iibsadaan hadda? Miyay sameynayaan cilmi baaris ka hor inta aysan gaarin go'aanka wax iibsiga? Mise waxay raadinayaan kaliya xog aan shaqo ku lahayn inay wax iibsadaan, laakiin waxay raadinayaan dhibaato ay u baahan karaan xal?
Aan mid walba tusaale u eegno.
Ujeedada Iibka Sare: Erayga ujeedka wax iibsiga sare wuxuu noqon karaa magac alaab, sida "RV kirada las vegas". Haddii aad taas ku qorto Google oo aad eegto natiijooyinka, waxaad arkaysaa xayaysiisyo farabadan oo loogu talagalay kirooyinka RV iyo khariidad muujinaysa shirkadaha kiraynta ee Las Vegas RV. Qof raadinaya tan waxay u badan tahay inuu diyaar u yahay inuu iibsado, ama aad u dhow.
Ujeedada Iibka Sare
Ujeeddada Cilmi-baarista: Kuwani waa ereyo muhiim ah oo ay dadku wali ku sameynayaan cilmi baaris ku saabsan xalalka, laakiin waxay u badan tahay inay dhowaan iibsan doonaan. Ereyada muhiimka ah ee "Ugu Fiican" iyo "Dib-u-eegis" waxay inta badan ku dhacaan qaybtan, sida "shirkadaha kiraynta RV ee ugu fiican".
Ujeedada Iibka Dhexdhexaadka ah
Ujeedka XogtaEreyadan muhiimka ah waxaa loogu talagalay dadka si adag u raadiya macluumaadka oo aan diyaar u ahayn ama xitaa ka fikirin inay wax iibsadaan. Tusaalaha "intee jir buu yahay Trump" wuxuu hoos yimaadaa qaybtan. Tusaale kale oo ku habboon kiraynta RV waxay noqon kartaa wax la mid ah "sida loola safro waddanka xayawaanka rabaayada ah".
Si kastaba ha ahaatee, ha u malayn in aad kaliya tagto ka dib iibsashada erayada muhiimka ah ee ujeedada. Erayada muhiimka ah ee macluumaadka ayaa kaa caawin kara inaad dhisto liiska iimaylkaaga oo aad dadka geliso marinka suuqgeyneed si ay ugu dambayn kaaga iibsadaan.
Ujeedada raadinta sidoo kale waa muhiim in la ogaado sababtoo ah waxay saamaysaa waxa ku jira darajada Google. Haddii aad isku daydo inaad abuurto bog deg deg ah si aad ugu darajeyso erey-bixineed marka Google uu ku jiro darajada qaab-dhismeedka blog-ka-dheer, waxaa laga yaabaa inaadan darajeyn doonin xitaa bogga SEO ee qumman iyo dib-u-celinta badan sababtoo ah maahan waxa adeegsaduhu raadinayo waayo.
Tusaale ahaan, aynu nidhaahno waxaad doonaysaa inaad u kala sarrayso "kaamamka yaryar". Markaa waxaad abuurtaa hage lahaanshaha xero yar yar. Si kastaba ha noqotee, marka aan eegno Google, waxaan arki karnaa in dadku aysan raadineynin hage, laakiin halkii, waxay raadinayaan liiska kaamamka yaryar si ay u iibsadaan.
Raadi Ujeedada Tusaalaha
Taasi waa sababta xitaa ka dib markaad hesho fikrado muhiim ah oo wanaagsan, Waa inaad had iyo jeer gacanta ku qortaa Google oo aad eegtaa waxa hadda qiimaynaya si aad fikrad uga hesho waxaad u baahan tahay inaad abuurto. Ha qorin tilmaame weyn marka ay dadku rabaan jawaab degdeg ah oo ha isku dayin inaad darajada geliso boostada blogka marka ay dadku raadinayaan inay iibsadaan alaab.
Doorka LSI iyo Ereyada la midka ah
Horaan, waxaan u sheegay ereyada muhiimka ah ee LSI. Tani waxay u taagan tahay Tilmaanta Semantic-ka Daahsoon, waana hab qurux badan oo Google u leeyahay inuu yidhaahdo "Sannonyms iyo ereyada muhiimka ah ee la xidhiidha". Waa kelmado si caadi ah loogu wada helo hal mawduuc oo macno ahaan isku xidhan.
Waxay muhiim u yihiin inay u sheegaan makiinadaha raadinta waxa nuxurkaagu ku saabsan yahay maadaama ay jiri karaan macnayaal badan oo isku mid ah ereyada muhiimka ah.
Tusaale ahaan, aan dhahno waxaad qoraysaa maqaal ku saabsan baabuurta. Waxaa jira shan "baabuur" oo kala duwan oo suurtagal ah oo aad ka hadli karto:
Baabuur, filimka Disney ee firfircoon
CARS, Ururka Canadian Isboortiga Rally
CARs, Xeerarka Duulimaadyada Kanada
(The) Baabuurta, kooxdii muusiga ee Maraykanka 1970-yadii
Sidee buu Google u garanayaa nooca "baabuur" aad ka hadlayso? By LSI ereyada muhiimka ah! Fiiri:
Isticmaalka erayada "baabuur", "la isticmaalo", "cusub", "iib", "iib", iwm.
Isticmaalka erayada "filim", "filim", "Disney", iwm.
Isticmaalka erayada "urur", "urur", "isboorti", iwm.
Iyadoo la adeegsanayo erayada " duulista ", "regulation", "maamul", iwm.
Inkastoo ereyada muhiimka ah ee LSI aysan muhiim ahayn inta lagu jiro cilmi-baarista ereyga muhiimka ah, waxay muhiim yihiin markaad horumarinayso nuxurkaaga. Waa inaad ku dartaa ereyada muhiimka ah ee LSI ee kala duwan si dabiici ah nuxurkaaga adigoon buuxin, oo ay ku jiraan ciwaanka iyo qoraalka alt image.
Waxaad ka heli kartaa ereyada muhiimka ah ee LSI (oo wax badan ka baro iyaga) qalab sida LSI Graph.
Sideed u Sameysaa Cilmi-baarista Keyword? (Hagaha Tallaabo-tallaabo ah)
Hagaag, hadda oo aad si adag u fahamtay cabbirrada muhiimka ah ee ka dambeeya cilmi-baarista ereyga muhiimka ah, waa waqtigii aad dhab ahaantii heli lahayd ereyada muhiimka ah ee adiga kuu gaar ah! Waxa jira saddex tillaabo oo aan raaco marka aan samaynayo cilmi-baadhis ereyga muhiimka ah ee goob cusub, oo leh ikhtiyaari, tillaabo afraad oo horumarsan:
Raadi fikradaha ereyga muhiimka ah
Hubi erayga muhiimka ah ee TRUE adag iyo mugga raadinta
Go'aami ujeedkooda raadinta
(Ikhtiyaar ah) Soo hel oo isticmaal silos ereyga muhiimka ah
Aan ku quusno!
Talaabada 1: Hel Fikradaha Kelmad Furaha
Helitaanka fikradaha ereyada muhiimka ah waa qaybta ugu fudud. Waxa jira qalab badan oo soo tufi doona boqolaal fikrado marka la gujiyo badhanka. Waa kala shaandhayn iyaga u baahan dadaal, laakiin waan gaari doonaa taas.
Hadda, u fiirso qaybta "Qalabka Cilmi-baarista Kelmadda ugu Wanaagsan" ee hoose oo soo qaado suntaada. Waxaan u adeegsan doonaa Ahrefs tusaalooyinka sababtoo ah waa aaladda aan jeclahay oo leh dhammaan gambaleelka iyo foorida, laakiin aaladaha kale sidoo kale way shaqeyn karaan.
Habka aan ugu jecelahay si aan u helo fursadaha muhiimka ah ee muhiimka ah waa basaasnimada tartankayga. Waxaad tan ku samayn kartaa adigoo ku dhejinaya boggooda qalab kasta oo ereyga muhiimka ah oo fiiri ereyadooda muhiimka ah. Ahrefs waxay haysataa qalab heersare ah oo loo yaqaan Falanqaynta Farqiga Mawduuca.
Halkan sida ay u shaqayso:
1. Ku xidh goobtaada Ahrefs, ka dibna dhagsii Farqiga Mawduuca isku xidhka liiska gacanta bidix.
2. Ku xidh 1-10 tartame kuwaas oo Google-ka ugu darajo sareeya ereyada muhiimka ah ee aad rabto in aad u kala sarayso. Waxaad ka heli kartaa adiga oo googooya ereyada muhiimka ah oo ka soo qaada URL-yada Google-ka ama adiga oo isticmaalaya Ahrefs 'Aalladda Tartamaysa ee ka sarraysa isku xirka faraqa nuxurka. Orod qalabka.
3. Halkan, waxaad ka dhoofin kartaa liiska xaashida Excel haddii aad rabto. Waxaan jeclahay inaan si sax ah u dhex maro liiska Ahrefs. Haddii aan arko kelmad muhiim ah oo laga yaabo in aan rabo in aan bartilmaameedsado, waxaan ku furay tab cusub oo aan ku daraa liiska ereyada muhiimka ah aniga oo isticmaalaya + ku dar badhanka midigta sare.
Haddii aadan haysanin Ahrefs ama qalab kale oo muhiim ah oo kuu ogolaanaya inaad aragto ereyada muhiimka ah ee tartamayaasha, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa qalab sida Keyword Shitter si uu ku siiyo fikrado badan, ka dibna ku tijaabi adigoo isticmaalaya qalab kale oo bilaash ah sida Uber Suggest.
Talaabada 2: Hubi dhibka ereyga muhiimka ah ee RUNTA ah iyo cabbirka raadinta
Markaad haysato liiska fikradaha muhiimka ah ee aad ku qanacsan tahay inaad la shaqeyso (waxaan ujeedaa 50-100 markiiba laakiin waxaad samayn kartaa wax badan oo dheeraad ah), waa waqtigii aad arki lahayd kuwa xitaa mudan in la raadiyo iyada oo ku saleysan dhibka ereyga muhiimka ah (KD) iyo raadinta mugga.
Waxaa jira hal digniin… mugga raadinta iyo KD aad ku aragto inta badan aaladaha cilmi-baarista ereyada muhiimka ah ayaa inta badan ka fog. KD ee Ahrefs waxay ku salaysan tahay kaliya tirada isku xidhka bogga natiijooyinka ugu sarreeya, taas oo aan ahayn 100% sawir sax ah oo dhibka dhabta ah ee lagu qiimeeyo kelmadda muhiimka ah.
Tani waa sababta oo ah SEO waa xayawaan adag, iyo waxyaabo ay ka mid yihiin qiimeynta domain (oo aan dabooli doono waqti gaaban) iyo isku xirka gudaha ayaa saameyn weyn ku yeelan kara qiimeynta. Backlinks waa qayb ka mid ah sawirka kaliya.
Iyo mugga raadinta? Taasi kuma jiraan LSI iyo ereyada muhiimka ah ee daba-dheer!
Xasuusnoow tusaalaha gear-ka xero ee aan ku tusay bilawgii maqaalkan kaas oo u dhigma in ka badan 1,900 ereyada muhiimka ah? Erayga ugu muhiimsan wuxuu lahaa kaliya 2,700 baaritaan bishii, haddana maqaalku wuxuu helaa in ka badan 5,000 booqasho bishii. Taasi waa sababta oo ah waxay u sarraysaa ereyada muhiimka ah ee kale marka laga reebo ereyga muhiimka ah.
Markaa haddii aad aragto kelmad muhiim ah oo leh 200 oo raadin bishiiba, jaanisyadu waa runtii in ka badan 500 ama 1,000 haddii aad ku darto ereyada muhiimka ah ee la xidhiidha oo aad u darajayn doonto.
Si loo go'aamiyo mugga raadinta dhabta ah, u qaado natiijada #1 Google ee erayga muhiimka ah oo ku xidh Ahrefs ama Uber Suggest si aad u aragto inta taraafig ee boggaas dhab ahaantii helayo. Taasi waa inay ku siiso sawir sax ah oo mugga raadinta ereyga muhiimka ah ee la bixiyay.
Halkan waxaa ah taraafikada bogga darajada #1 ee "camero yaryar", kelmad muhim ah oo hesha ~3,400 baadhitaan bishii:
Mugga Raadinta Runta ah
Eeg sida boggu u helo in ka badan 10k taraafikada, inkastoo erayga muhiimka ah uu helayo saddex meelood oo meel ka mid ah? Taasi waa awooda mugga raadinta runta ah.
Miisaanka kale, dhibka ereyga muhiimka ah, sidoo kale 100% sax maaha. Laakin in la ogaado dhibka dhabta ah waa mid fudud sida fiirinta boggaga sare ee maamulka domain (DA), ama qiimeynta domain (DR) haddii aad isticmaalayso Ahrefs. Aan sharaxo.
Haddii erayga muhiimka ah uu leeyahay dhibco dhibco ah 8, laakiin boggaga ugu sarreeya waa dhammaan DR 80+, qiimeynta goobtaada ereyada muhiimka ah waxay noqon kartaa mid adag haddii aad leedahay DR hooseeya, inkastoo dhibcaha dhibtu yar tahay.
Taladaydu waa in aan hiigsado ereyada muhiimka ah ee leh 30 KD ama ka hooseeya haddii aad ka yar tahay 40 DR, ka dibna laan ka bixi markaad dhisto xiriiryo badan oo aad hesho maamul sare. Marka uu DR-gaagu kor u kaco, xidhiidhintaada guduhu waxa ay u qalantaa in ka badan "jusiirka isku xidhka" (ama u gudub "maamulka bogga" oo ku xidhan isha aad dhagaysato).
Laakiin tani maaha maqaal ku saabsan SEO-ga farsamada, markaa waan ka tagi doonaa taas hadda!
Tallaabada 3: Go'aami Ujeedada Raadinta
Halkaa marka ay marayso, waa inaad haysataa liis quruxsan oo ereyo muhiim ah oo ay kugu adag tahay inaad ku raaxaysato wax ka qabashada iyo mugga raadinta ee aad ku faraxsanaan lahayd inaad qabato. Hadda waa waqtigii la ogaan lahaa waxa ay dadku dhab ahaantii rabaan marka ay raadiyaan shuruudahan iyo haddii ay ku habboon tahay suuqgeynta iyo yoolalka dakhliga iyo in kale.
Qaybtani waa mid fudud sida Googling keyword kasta oo liiskaaga ku jira oo eegaya 3-5 natiijooyinka ugu sarreeya. Dib u eeg cinwaankooda meta iyo sharraxaaddooda, guji si aad u aragto bogga, oo hubi xagal ay ka qaateen bogga.
Inta badan ma yihiin qoraallo liis ah? Sidee loo sameeyaa? Tilmaamaha ugu dambeeya? Bog degitaan ah? Wax kale?
Sidee bay ugu eg yihiin inay bogga lacag ka samaynayaan? Miyay isticmaalayaan xayeysiisyada bandhiga? Iibinta alaabada si ay xal ugu noqoto dhibaatada? Suuqgeynta xiriirka la leh? Kaliya qabashada iimaylada oo aan run ahaantii waxba iibin?
Fiiri faallooyinka. Dadku ma weydiinayaan su'aalo aan maqaalka looga jawaabin? Ma u muuqdaan kuwo faraxsan, xanaaqsan, ama dhexdhexaad ah?
Dhammaan su'aalahan ayaa kaa caawin doona inaad wacdo nooca boostada/bogga aad u baahan tahay inaad abuurto, sida aad uga faa'iidaysan karto (ama u isticmaal si aad u qabato emails/ riix ogeysiisyada macaamiisha / taageerayaasha bulshada), iyo waxaad samayn karto si aad u hagaajiso. .
Markaad dhex marayso erey kasta oo muhiim ah, ku hayso jawaabahaaga su'aalahan xaashida faafinta ama dukumeentiga ereyga si aad ula socoto kuwa aad xiisaynayso inaad raacdo. Liiskaaga u dambeeya waa liiska aad bilaabi karto daba gal!
Si aan ku siiyo fikrad wanaagsan oo ku saabsan sida loo go'aamiyo ujeeddada raadinta, halkan waxaa ah tusaalooyin dhowr ah oo ixtiraam u leh boostada Moz:
waa maxay [product name]
sidee u shaqeeyaa [product name]
Sideen u isticmaalaa [product name]
Ujeeddada Ganacsiga (Ujeeddada Cilmi-baarista AKA):
ugu fiican [magaca badeecada]
barbar dhig [product name]
waa maxay kan ugu sarreeya [magaca badeecada]
[midabka/qaabka/ cabbirka] [magaca badeecada]
Ujeedada wax kala iibsiga (AKA Iibka Ujeedada):
meeqa ayuu ku kacayaa [product name]
[magaca badeecada] ee [goobta]
dalbo [product name] online
[magaca badeecada] ii dhow
la awoodi karo [name brand] [product name]
Jaantuskan ka yimid Ahrefs waxa kale oo laga yaabaa inuu ku caawiyo:
Ku daalay martigeliyaha gaabis ah ee boggaaga WordPress? Waxaan bixinaa adeegayaal aad u dheereeya iyo 24/7 taageero heer caalami ah oo ka timaada khubarada WordPress. Eeg qorshayaashayada
Shaxda Ujeeddada Raadinta Ahrefs
Hadda qaado liiskaaga oo ka bax wax ka kooban! Ama, waxaad raaci kartaa hal tallaabo oo u dambaysa.
Talaabada 4: (Heerka Sare) Raadi oo Adeegso Silos
Haddii aad runtii rabto inaad si fiican u qabato, waxaad si ikhtiyaari ah u qaadi kartaa hal tallaabo oo dheeraad ah oo raadi silos keyword si aad u abuurto silos content u dhigma goobtaada.
Silo erayga muhiimka ah waa liiska ereyada muhiimka ah ee aadka laxidhiidha oo aad ka abuuri karto waxyaabo ku xeeran si aad isugu xidho goobtaada (sidoo kale loo yaqaan habka "hub and speak"). Waa kan muuqaal aan sameeyay si uu kaaga caawiyo inaad fahanto:
Hub iyo Habka Hadalka ee Suuqgeynta Macluumaadka
Asal ahaan, waxaad abuurtaa bogga hube ee bartilmaameedka ah ee ereyga koowaad ee aad rabto inaad ku darajeyso, ka dibna samee bogag "hadal" oo ku salaysan ereyada muhiimka ah ee la xidhiidha iyo kuwa dheer.
Tusaale ahaan, markii aan cilmi-baarista ereyga muhiimka ah u samaynayo xaaskayga Kayla blog-ka cuntada vegan, waxaan helay kelmado muhim ah oo taxane ah oo la xidhiidha oo weydiinaya "Miyay ____ vegan" tahay. Dadku waxay rabeen inay ogaadaan in cuntooyinka caadiga ah, sida bacaha, donuts, ama Oreos ay yihiin vegan.
Si aan ugu kala sarrayno ereyadan muhiimka ah, waxaanu abuurnay boggan hube ee ku xidha dhammaan maqaallada "Is ____ vegan" Maqaalladani dhammaantood waxay ku xidhan yihiin midba midka kale, iyo sidoo kale dib ugu noqda bogga muhiimka ah.
Isku xirkan waxaa loo yaqaan siloing content, waxayna si fiican u shaqeysaa laba sababood dartood:
Sababtoo ah dhammaan boggaggu way isku xidhan yihiin, haddii aad dhisto isku-xireyaasha bogag kasta, waxay hagaajinaysaa awoodda bogga dhammaan boggaga kale.
Google waxay isticmaashaa ku habboonaanta algoorithm-keeda, iyo maadaama mawduucyadan ay dhammaantood aad u khuseeyaan midba midka kale, waxay sii horumarin kartaa darajooyinkaaga.
Haddaba sidee ku helaysaa erayga muhiimka ah silos? Ma jiro xal xabbad qalin ah - waa inaad ku fiican tahay inaad soo qaadato qaababka oo aad ogaato ku habboonaanta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira hal farsamo oo aad isticmaali karto si aad isku daydo oo aad u hesho: buugaag.
Ka raadi buugaag mawduucaaga ku saabsan Amazon oo ka baadho miiska waxa ku jira. Marar badan, buugaagta waxaa ka buuxa erayga muhiimka ah silos: taasi waa waxa iyaga ka dhigaya buug! Ka fakar ku xidhidhiyaha sidii bogga xuddunta iyo cutubyada sida boggaga hadalka.
Fikradaha Silo ee erayga muhiimka ah
Dabcan, sida aad ku arki karto tusaalaha sare, ereyadan muhiimka ah maahan waxa ay dadku ka raadinayaan Google. Dadku kuma qoraan "vegan out in the world", laakiin waxay ku qoraan "sida veganka looga cuno makhaayadaha" ama "sida loo cuno khudaar marka la joogo kulamada qoyska". Markaa waxaa laga yaabaa inaad sameyso xoogaa sleuthing si aad u ogaato ereyga muhiimka ah ee u dhigma cinwaanka cutubka buugaagta aad ka heli karto.
Markaad hesho silo suurtagal ah, hubso inaad ku socodsiiso ereyada muhiimka ah tillaabooyinka 2 iyo 3 ka hor intaadan ballan qaadin! Sababtoo ah waxaad heshay silo, macnaheedu maaha inaad raacdo. Si macquul ah uga fakar sida dhammaan waxyaabahaas ku jira ay ugu habboonaan doonaan ganacsigaaga iyo sida aad mustaqbalka u ballaarin karto.
Waa maxay Qalabka Cilmi-baarista Erayga Ugu Wanaagsan?
Waxaa jira daraasiin, haddii aysan ahayn boqollaal qalab cilmi-baaris oo ereyga muhiimka ah ee suuqa maanta. Qaarkood waa kuwo aad u gaar ah, laakiin intooda badan way ka duwan yihiin fikrado isku mid ah. Haddaba waa maxay kan ugu fiican? Aan ku kala saarno qalab lacag la'aan ah oo lacag la'aan ah.
Aaladaha Cilmi-baarista Keyword Free
Waxa jira laba qalab oo cilmi-baadhiseed oo bilaash ah oo aan adeegsaday oo aan ku taliyay:
Aynu hakinno dhammaan beddelka Neil Patel hal ilbidhiqsi. Qalabkani wuxuu qabtaa shaqadiisa, haddii aad ku jirto miisaaniyad, waxay ka shaqayn kartaa inaad ku bilowdo SEO.
Ubersuggest asal ahaan waa bilaash, nooca la miisaamay ee Ahrefs ama Moz. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad basaasto xiriiriyaha dambe ee tartame, arag waxa ereyada muhiimka ah ee ay u kala sarreeyeen, oo aad sameyso cilmi-baaris erey oo hufan. Haddii aad ku samaynayso SEO miisaaniyad, waxay heli kartaa shaqada.
Keyword Shitter waa wax aad u badan oo sax ah waxa ay u egtahay. Waxaad ku qortaa kelmad furaha waxaadna helaysaa boqollaal talobixin oo kelmad fure ah. Way fiicantahay haddii aad kaliya u baahan tahay fikrado badan, laakiin badanaa waxay ku tufisaa ereyada muhiimka ah ee la xidhiidha midka aad ku qortay, maaha mid gaar ah, fikrado gaar ah.
Aaladaha Cilmi-baarista Erayga Furaha ee Lacag-bixinta
Hadda waxaan galeynaa qalabka wiil-weyn (ama gabadha)! Haddii aad dhab ka tahay SEO oo aad haysato miisaaniyad, kuwani waa qalabka aad rabto inaad isticmaasho.
Furaha Meel kasta
Ahrefs waa gacan-hoos u dhigaya aaladda SEO ee aan jeclahay; ma aha oo kaliya cilmi-baarista ereyga muhiimka ah, laakiin sidoo kale dhismaha isku-xirnaanta, raadinta darajada, la-soo-kabashada fikradaha nuxurka, iyo in ka badan. Waxay leedahay dhammaan gambaleelka iyo foorida waxayna si fudud u tahay qalabka SEO-ga ugu fiican ee suuqa. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku timaadaa qiimo sare, iyadoo kaliya qalabka aasaasiga ah uu yahay $ 99 bishii.
SEMrush waa qalab kale oo weyn oo cilmi baaris ah. Way ka jaban tahay Ahrefs, laakiin ma laha astaamo aad u badan. Waxay si aad ah ugu jihaysan tahay suuqgeynta mashiinka raadinta iyo PPC (sidaas darteed SEM ee SEMrush). Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto qalab lacag-bixineed oo weyn laakiin aadan rabin inaad ku bixiso khidmadaha Ahrefs, waa ikhtiyaar sax ah. Waxay xitaa kuu ogolaanaysaa inaad tijaabiso alaabta bilaashka ah!
Aragtida Keyword waxay sheeganeysaa inay tahay "sida ugu caqli badan ee lagu kooxeeyo ereyada muhiimka ah loona kala saaro ujeeddada raadinta"...iyo sabab wanaagsan. Aaladu waxay isticmaashaa xogta bogga natiijada raadinta tooska ah ee juqraafi-gaar ah si ay u ururiso ereyada muhiimka ah kooxo la mid ah iyaga oo sidoo kale ka shaqeynaya ujeedada raadinta ee ka dambeysa.
Isticmaaluhu wuxuu si fudud u dhejiyaa liiska ereyada muhiimka ah (in alla intaad rabto) qalabkuna wuxuu soo tufi doonaa dukumeenti xaashi ah oo Google ah oo horay loo habeeyay oo ay ku jiraan ereyo muhiim ah oo la soo ururiyay iyo ujeeddada laga soo dhex saaray. Cusbooneysiinteedii ugu dambeysay waxay sidoo kale u kala saartaa ereyada muhiimka ah ee la kooxeeyay "mawduucyada heerka ugu sarreeya" si aad u aragto waxa xaruntoodu tahay inay noqdaan iyo waxa ay ku hadlaan waxay u ekaan karaan. Fikradaha ayaa sidoo kale kuu sheegi doona ereyada muhiimka ah ee aad ku beegsan karto hal bog, ama u baahan in la jebiyo bogag badan.
Keywords meel walba waa qalab cajiib ah oo hore xor u ahaan jiray oo hadda ku salaysan credit. Qalabku wuxuu ku tusayaa mugga raadinta, tartanka, iyo celceliska CPC ee saxda ah ee Google mar kasta oo aad wax ku qorto. Waxa kale oo ay ku tusinaysaa xisaabaadka ereyada muhiimka ah ee la xidhiidha iyo "dadka sidoo kale raadiya" ereyada muhiimka ah. Iyadoo aan loo eegin aaladaha kale ee aad isticmaashid, waxaan aad ugu talinayaa in aad midkan qabsato.
Ma rabtaa qalab badan oo SEO ah? Baadhid BehmasterLiiska plugins-ka SEO ee ay tahay in loo yeesho WordPress.
Xidhmada la soo jeediyay
Haddaba waa maxay qalabka cilmi-baarista ereyga muhiimka ah ee ay tahay inaad hesho? Xirmada aan soo jeediyay waa Ahrefs iyo Keywords Meel kasta. Ahrefs waa software SEO ah oo dhamaystiran kaas oo kaa caawin doona inaad darajada boggaaga, ma aha oo kaliya inaad hesho ereyada muhiimka ah. Iyo Keywords Meelkasta waxay kuu ogolaanayaan inaad aragto mugga raadinta iyo fikradaha ereyada muhiimka ah wakhti kasta oo aad wax ka raadinayso Google-ka. Intaa waxaa dheer waa bilaash, markaa maxaan jeclayn?
SEO oo aan lahayn cilmi-baaris ereyga muhiimka ah waa wax aan faa'iido lahayn. Baro sida loo sameeyo hal mar iyo dhammaan si loo sii daayo daad badan oo taraafig dabiici ah oo ku wajahan goobtaada! 🌊🏄Riix halkan Tweet
Waa kuwan soo koobid degdeg ah oo ku saabsan wax kasta oo aan soo koobnay:
Cilmi-baarista ereyga muhiimka ah ayaa aad muhiim ugu ah olole kasta oo SEO ah mana aha in laga boodo ama aan si fudud loo qaadan.
Mugga raadinta iyo dhibka ereyga muhiimka ah ayaa noqon kara wax khiyaano. Samee cilmi-baaris qoto dheer adoo ku qoraya ereyga muhiimka ah Google oo dib u eeg natiijooyinka ka hor intaadan go'aan gaarin.
Ha ku kadsoomin mugga raadinta hooseeya. Hubi mugga raadinta runta ah adiga oo dib u eegaya boggaga sare ee raadinta taraafikada addoo isticmaalaya Ubersuggest ama Ahrefs.
Ujeedada raadinta waa boqor. Hubi in waxa aad abuurayso ay la mid yihiin waxa ay dadku rabaan in ay arkaan (iyo waxa Google horaba tusayo).
Raadi erayga muhiimka ah silos. Waxay noqon karaan jid-gaab lagu qiimeeyo boggaga si dhakhso leh.
Waana intaas oo dhan! Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, xor ayaad u tahay inaad faallo ka bixiso xagga hoose ama ii soo dir email. Si aad u hesho caawinaad dheeri ah oo SEO ah, guji halkan si aad u akhrido hagahayga tallaabo-tallaabo ah iyo hagahan qotoda dheer ee cajiibka ah ee ku saabsan sida loogu kaxeeyo taraafikada boggaaga.
Hubi kuwan sirta ah (iyo aadka waxtarka leh) ee Mac gaaga
Ku Hagaaji Shaqada Macmiilkaga Tilmaamaha Maareynta Goobta Cusub ee SiteGround Hosting